Xinhua Myanmar - ဟိုက်ဒရောက်စီကလိုရိုကွင်းဆေးပြား နှင့် အက်ဇစ်သရိုမိုင်စင်ဆေးပြား တို့ ကို ဆရာဝန်လက်မှတ်ပါမှ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ သောက်သုံးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြရန်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
ဟိုက်ဒရောက်စီကလိုရိုကွင်းဆေးပြား နှင့် အက်ဇစ်သရိုမိုင်စင်ဆေးပြား တို့ ကို ဆရာဝန်လက်မှတ်ပါမှ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ သောက်သုံးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြရန်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
ရန်ကုန်မြို့တွင် နှာခေါင်းစည်းဖြင့်သွားလာနေသူတစ်ဦးအားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) MYANMAR
COVID-19 ကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်းတွင် Hydroxychloroquine Tablet (ဟိုက်ဒရောက်စီကလိုရိုကွင်းဆေးပြား) နှင့် Azithromycin Tablet (အက်ဇစ်သရိုမိုင်စင်ဆေးပြား) တို့ ကို ဆရာဝန်လက်မှတ်ပါမှ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ သောက်သုံးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြရန် မြန်မာနိုင်ငံ စားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ က မတ် ၂၉ ရက် တွင် အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။
WHO အနဖြင့် COVID-19 ကုသဖို့ စမ်းသပ် ဆေးများ စဉ်းစားရာတွင် အဓိက ထားစဉ်းစားသည့် ဆေး ၄မျိုးရှိကြောင်း၊ ၎င်းတို့မှာ ၁. Remdesevir- ရမ်ဒီဆာဘီယာ ဆေး၊၂. ငှက်ဖျားကုသရာတွင် အသုံးပြုသည့် chloroquine and hydroxychloroquine- ကလိုရိုကွင်း နဲ့ ဟိုက်ဒရောက်စီကလိုရိုကွင်း၊၃. HIV ကုသရေးတွင်ပါသည့် lopinavir and ritonavir၂မျိုးပေါင်းထားသည့် ဆေးနှင့် ၄. နံပတ် ၃ နဲ့ အတူပေါင်းစပ်ထားသည့် interferon-beta ဟုခေါ်သည့် immune system messenger- ခုခံအားတက်ရန် သုံးသည့် နေရာတွင် သုံးသည့် ဆေး များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် မည်သည့်ဆေးမဆို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မရှိပဲ မသောက်သင့်ကြောင်း၊ ဆေးတိုင်းသည် သူ့ course နှင့်သူ သောက်ရခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် မမှန်မကန်သောက်သုံးပါက ဆေးယဉ်တတ်ကြောင်း၊ ဆေးတိုင်းသည် side effect (ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး)များရှိကြောင်း ဒေါက်တာစိုးကျော်က ဆိုသည်။
“တကယ်လို့ သာ WHO စမ်းသပ်ဆေးတွေ အောင်မြင်ခဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ကိုယ်သဘောနဲ့ ကိုယ် သောက်သုံးထားမိတဲ့ အတွက် ဆေးယဉ်နေခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဒါကြောင့် ဆရာညွှန်ကြားချက်မရှိပဲ လုံးဝ မသောက်သင့်ပါဘူး။ တကယ်ထိရောက်ပြီလို့ ကြေညာတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် သောက်ခဲ့လို့ ဆေးယဉ် ပါး သွားမှာ စိုးရိမ်လို့ ကိုယ်သဘောနဲ့ ကိုယ် ဘယ်သူမှ မသောက်ကြပါနဲ့ လို့ သတိပေးချင်ပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာစိုးကျော် က သတိပေးစကားပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဆေး ၂မျိုး အား ပြည်သူလူထုမှ မလိုလားအပ်ဘဲ ဝယ်ယူ သောက်သုံးခြင်း ပြုလုပ်နေကြသည့် အတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်ထဲတွင်ပါရှိသည်။ (Xinhua)
Previous Article ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် တရုတ်ပြည် မြန်မာပညာတော်သင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်လှူဒါန်း
Next Article COVID-19 သက်ရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မတ် ၃၀ ရက်မှ စ၍ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်တွင် ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်